Imigomo neMeko - i-Element Society
Ukusebenzisa iwebsite yethu
Kucelwa ufunde le migaqo kunye neemeko ngenyameko njengoko zilawula ukusetyenziswa kwele website. Ukusebenzisa kwakho kwesi siza kukuvumela ukwamkelwa kwezi Migaqo neMibandela, eqala ukusebenza ukususela ngomhla wokutyelela kwakho kuqala kwisayithi. Ukuba le Migaqo neMibandela ayimkelekanga ngokupheleleyo, nceda unqamle ukusetyenziswa kwesi siza ngokukhawuleza. Uyavuma ukusebenzisa le ndawo kuphela ngeenjongo ezisemthethweni, nangendlela engaphula amalungelo alo naluphi na umntu wesithathu, okanye ukukhawulela okanye ukuvimbela ukusebenzisa nokuzonwabisa kwesi siza.
Le webhsayithi kunye nolwazi lwayo lunikezelwa 'ngokungqinelanayo' ngokungabikho nantanantoni nayiphi na inhlobo, nokuba ivakalise okanye ifumaneke. Ukusetyenziswa kwale website kunye nolwazi olukulo luphela kumngcipheko wodwa lomsebenzisi. Akukho mcimbi u-Element Society uza kuhlawulwa nayiphi na umonakalo ovela kuyo okanye ehambelana nale website. Ikhowudi yakho yodwa kunye eyodwa yokungoneleliseki kweli bhsayithi kunye / okanye ulwazi oluqulethwe is ukuyeka ukusebenzisa indawo kunye nolwazi.
Umbutho we-Element awuvumeli ukuba imisebenzi equlethwe kule ndawo ayiyi kuphazamiseka okanye mpazamo, okanye ukuba iziphene ziya kulungiswa.
Ukukhuselwa kwintsholongwane, ukukhwabanisa kunye namanye amatyala
Senza konke umgudu wokuhlola nokuvavanya izinto kwiimigangatho zemveliso, kunjalo kufuneka uthathe amanyathelo akho okukhusela ukuqinisekisa ukuba inkqubo oyisebenzisayo yokufikelela kule website ayikukubeka emngciphekweni weentsholongwane, ikhowudi ekhohlakeleyo yekhompyutha okanye ezinye iindlela zokuphazamiseka ezingonakalisa inkqubo yakho yekhompyutha.
Asikwazi ukufumana nayiphi na imbopheleleko nayiphi na ilahleko, ukuphazanyiswa okanye ukulimala kwedatha yakho okanye inkqubo yakho yekhompyutheni engenzeka ngelixa usebenzisa iincwadi ezivela kule website. Awufanele usisebenzise kakubi isayithi yethu ngokuzisa ngokuqinisekileyo ii-virus, i-trojans, iimbungu, iibhomu okanye ezinye izinto ezinobungozi okanye ezobuchwepheshe. Awufanele uzame ukufumana ukungena ngemvume okungagunyazisiweyo kwisayithi yethu, umncedisi apho kugcinwa khona indawo yethu okanye nayiphi na iseva, ikhompyutheni okanye isiseko sedatha esixhomekeke kwisayithi yethu. Awufanele uhlasele isayithi lethu ngokuhlaselwa kwenkonzo yokukhanyela okanye ukuhlaselwa kwenkonzo yokuphika.
Ngokuphula umthetho, uza kwenza ityala lolwaphulo-mthetho phantsi kwe-Computer Misuse Act 1990. Siza kubika nawuphi na ulwaphulo-mthetho kumagunya okuthotyelwa komthetho kwaye siya kusebenzisana nalawo magunya ngokubhengeza ubunikazi bakho kubo.
Ulwazi malunga nawe
Asisoze sidlule iinkcukacha osinikezelayo kunoma ubani ngaphandle kwalawo achazwe kumgaqo-nkqubo wethu wobumfihlo.
Nangona zonke iinzame ezinengqiqo zenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuchaneka komxholo, akukho mthwalo onokuthatyathwa kuyo nayiphina impazamo okanye ukungaphumeleli.
Nangona senza yonke imizamo yokugcina iwebhusayithi ye-Element Society kuze kube yimanje, asiboneleli naluphi na uqinisekiso, imimiselo okanye iziqinisekiso malunga nokuchaneka kolwazi kwisayithi. Asiyi kwamkela uxanduva lokulahleka okanye umonakalo obenziwa ngabasebenzisi bewebhusayithi, nokuba ingaqondiswanga ngqo, engazange ichane okanye ingabalulekanga, nokuba ingabangelwa ukuphulwa komthetho, ukuphulaphula isivumelwano okanye enye into.
Oku kubandakanya ukulahlekelwa kwe: ingeniso okanye ingeniso, ishishini, inzuzo okanye izivumelwano, ukulondolozwa kwangaphambili, idatha, ukulungelelanisa, impahla ebonakalayo okanye ulawulo olulahlekileyo okanye ixesha leofisi ekuhambisaneni nesayithi lethu okanye malunga nokusetyenziswa, ukungakwazi ukusebenzisa okanye iziphumo ukusetyenziswa kwesiza sethu, nayiphi na i-intanethi edibeneyo nayo nayiphi na into eposwe kuyo. Le meko ayinakuthintela amabango okulahleka okanye ukulimala kwipropati yakho ebonakalayo okanye nayiphi na amabango ekulahlekelwa kwezimali ngokuthe ngqo okungekho ngaphandle kwimiqathango echazwe ngasentla.
Oku akusithinteli uxanduva lwethu lokufa okanye ukulimala okubangelwa ukunganakwa kwethu, okanye ukunyaniseka kwethu ukukhwabanisa okanye ukuthetha kakubi ngokubhekiselele kwimiba ephambili, kwaye akukho nawuphi na uxanduva olungenakukhutshwa okanye lubekelwe phantsi komthetho osebenzayo.
Siyakwamkela kwaye sikhuthaza ezinye iiwebhusayithi ukuba zidibanise nolwazi olubanjelwe kula maphepha, kwaye akudingeki ukuba ucele imvume yokudibanisa kwi-elementsociety.co.uk
Nangona kunjalo, asikunikezi imvume yokubonisa ukuba iwebhusayithi yakho inxulumene nayo, okanye ivunyiwe yi-Element Society.
I-Element Society ayamkeli nayiphi na imfanelo phezu umxholo walezi ndawo zeqela lesithathu. Ubukho balezi ziqhagamshelwano alunakuvumela ukuba i-website, okanye iimbono ezichazwe kuzo. Ukuqhagamshela kwakho kwezi ziza kusemngciphekweni wakho.
Ukuhlaziywa kwezi migaqo
I-Element Society inokuhlaziya le Migqaliselo neMibandela nanini na, kwaye uyavuma ukuba ubuyekeze ngezihlandlo. Ukuba ukuhlaziywa akuvumelekanga kuwe, uyavuma ukuyeka ukufikelela kwesi siza msinya.
I-copyright, uphawu lokuthengisa kunye namalungelo epropati yengqondo
Akukho nxalenye yale webhusayithi, kuquka ulwazi, imifanekiso, iipoti, iifoto kunye nokubonakala kweso siza, inokukopishwa, iphinde ishicilelwe, isasaze okanye iphinde iphinde yenziwe nayiphi na indlela ngaphandle kwemvume ebhalwe phantsi yabanikazi be-copyright ngaphandle kweyakho, okanye ukusetyenziswa kwezoqoqosho.
Le Migaqo neMibandela iya kulawulwa yimithetho yase-England naseWales. Inkundla eNgilani naseWales iya kuba negunya malunga naliphi na ingxabano enokuvela.
Ukuba nayiphi na yale Migqaliselo neMibandela iya kugqitywa ukuba ayikho mthethweni, ayivumelekanga okanye ingenakunyanzeliswa ngenxa yoluphi na ilizwe okanye ilizwe apho le Migqaliselo ijoliswe ukuba isebenze, ngoko ngoko kwaye iCandelo elingekho mthethweni, livumelekile okanye linganyanzelwanga , iya kuhlanjululwa ize isuswe kule Migqaliselo kunye neMigqaliselo ekhoyo iya kuhlala, ihlale isetyenziswa ngokupheleleyo kwaye iqhubeke ibophelela kwaye iyanyanzelekile.